Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo sheegay sababta uusan isu casileyn kaddib guuldarradii Liverpool – Gool FM
(Manchester) 25 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guuldarro 5-0 ah kala kulantay kooxda Liverpool kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka Premier League kaasoo shalay ka dhacay garoonka Old Trafford, waxayna taasi cadaadiska ku kordhisay tababaraheeda Ole Gunnar Solskjaer.
Kaddib ciyaartaas, Ole oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuusan marnaba iska casili doonin jagada macalinnimo ee Man United, waxaana uu yiri: “Waan soo deg-degay, waan soo wada deg-degnay koox ahaan, waxaana dhow inaan is dhiibno” ayuu yiri tababaraha reer Norway.
“Wey adkaan doontaa inaan is-dhiibo, ciyaartoyda hoos ayay u dhici doonaan balse culeysyo badan ayaa halkan ka jira, waan ognahay inaan salka joogno, ma dareemi kari xaalad tan kasii xun, ee aan aragno waxa dhaca” ayuu hadalkiisa sii raaciyay macallinka Red Devils.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaanan wax koob ah ku guuleysan inta ay hoos joogto xukunka Solskjaer, waxaana saxaafadda Ingiriiska ay cadaadis saarayaan macallinkan inkastoo maamulka kooxda ugu guulaha badan horyaalka Premier League ay kalsooni badan siinayaan adeegahooda.
Macquul ma'ahan: David Beckham oo 175 milyan euro ku qaadanaya inuu noqdo wajiga Koobka Adduunka 2022... (Maxay tahay shaqada uu qaban doono isaga?)